Godot Engine: ihe ngosi ihe eji emeghe ihe na-egosi ihe ngosi nke mmadu ndi mmadu Site na Linux
Isaac | | Ndị ọzọ, Mmemme
Ofwa nke egwuregwu vidio na GNU / Linux ọ towapụrụ n'ụzọ dị oke njọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Anyị esila na egwuregwu vidio dị mfe na elementrị nke mbụ wee hụ ka aha Linux ga-adị ugbua n'ọtụtụ puku ma ụfọdụ n'ime ha ka amaara dịka AAA, ya bụ, ndị ukwu ndị egwuregwu na-amakarị nke ukwuu. Ọfọn, ụlọ ọrụ a na-eme nke ọma na mmasi na ụwa nke ihe nkiri dijitalụ na-edugakwa na mmelite nke ọrụ ndị ọzọ n'ụzọ dịwanye ngwa, dịka OpenGL, Vulkan, ụfọdụ ọba akwụkwọ, wdg.
Ọzọkwa, ọ bụghị ihe ọhụrụ ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu na e nwere ndị na-emeghe isi ndịna-emeputa engines. Anyị ahụla ọkwa ọkwa n'oge ndị ọzọ gbasara oghere ndị na-emeghe ihe na egwuregwu vidio dabere na ha nwere nkwado Linux. Ọfọn, taa anyị na-agbakwunye otu ọzọ na ndepụta ma anyị na-ewetara gị Godot engine. Ihe oru ngo bu ihe mepere emepe na ebumnuche zuru oke, obu ezie na ugbua ha egosiputa ngosi nke mmadu nke gbara agba nke ato ya. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu nkọwa gbasara ọrụ a ma ọ bụ nwee mmasị n’ibido iji ya dịka onye nrụpụta ọrụ ị bu n’obi, ị ga - ahụ ihe niile gbasara ya. ukara website.Dị ka ị pụrụ ịhụ na ebe nbudata nke weebụ, ọ dị maka ọtụtụ nyiwe, dịka Windows, MacOS na n'ezie maka Linux. Tụkwasị na nke a, ị ga-ahụ ngwugwu 32-bit na 64-bit na nbudata ndị ọzọ agbakwunyere maka nkwado C # (Mono Version), wdg, yana ozi gbasara obodo nke mepụtara ya, na ọtụtụ ihe iji chọpụta ma jiri Godo Engine. ...
N'oge a ọ dị n'ọtụtụ asụsụ, n'okpuru ikike MIT, ma na-enye ohere maka mmepe egwuregwu vidiyo ma 2D dị ka 3D.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị gbalịrị ịnweta Wikipedia iji chọta ozi gbasara nke a ma ọ bụ ọrụ ọzọ, kwuo na ị gafere na ọ dị nwute na Wiki emechibidoro na mkpesa nke iwu nwebisiinka ọhụrụ nke ezubere ịnakwere taa na nzuko omeiwu Europe na nke ahụ nwere ike kwụsị ọdịnaya nke Wikipedia, na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ… N'ụzọ dị mma, European Union kwadoro azụ site na nchịkọta nke ndị ọrụ Intaneti Europe !!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Godot Engine: Open Source Graphics Engine Gosiri Onye nke Atọ Shooter Demo
Otu n'ime ebe imuta akwukwo bu:
Gịnị mere dijo
Ọ bụghị maka ndị agbapụ nke atọ, ọ bụ nzube zuru oke, ọ bụghịkwa n'asụsụ Bekee, a sụgharịrị ya n'ọtụtụ asụsụ ruo ọtụtụ afọ: S
Zaghachi Ihe Mere